लगानीको नयाँ अवसर : राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको आईपीओ फागुन ४ गतेदेखि खुल्ने, कति दिने आवेदन ? - Arthasansar
लगानीको नयाँ अवसर : राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको आईपीओ फागुन ४ गतेदेखि खुल्ने, कति दिने आवेदन ?
मंगलबार, २५ माघ २०७८, ०७ : ३५ मा प्रकाशित
राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले फागुन ४ गते, बुधबारबाट साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएकाे छ ।
लगानीकर्ताले छिटाेमा फागुन ८ गतेदेखि ढीलाेमा फागुन १८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
संस्थाको साधारण सेयर (आईपीओ) लाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले ‘इक्रा एनपी आईआर बीबी’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस रेटिङले याे कम्पनी समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्न चुक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
राष्ट्र उत्थान लघुवित्तले आ.ब.२०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा गत आ.ब.को. सोही अवधिको तुलनामा आकर्षकप्रगति हासिल गरेको छ । जस अनुसार खुदमुनाफमा १४८ प्रतिशत, रिजर्भमा७९ प्रतिशत, कर्जा लगानीमा ६४ प्रतिशत, खुद व्याज आम्दानीमा ५७ प्रतिशत लगायत अधिकांस सूचकहरुमा प्रगति हासिल गरेको छ ।
खराबकर्जा करिब ५९ प्रतिशत घट्न गई जम्मा खराबकर्जा १.०३ प्रतिशतमासिमित राख्न संस्था सफलभएको छ जुन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मध्येकै कम हो । वित्तीय संस्थाले हालसम्मको संचितमूनाफा र चालु आ.ब.को बाँकी ६ महिनामा आर्जन गर्ने मूनाफाबाट आगामी बर्ष सेयरधनीहरुलाई करिब ५० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस सजिलै बाड्न सक्ने देखिन्छ ।
साथै,प्रकाशित आब्हानपत्र बमोजिम वित्तीय संस्थाको आ.ब.०७८/०७९ मा खुद मुनाफा करिब ८ करोड ५ लाख, आ.ब. ०७९/०८० मा रु. १९ करोड ७३ लाख र आ.ब. ०८०/०८१ मा रु २७ करोड ५ लाख हुने र सोहि अवधिमाप्रति सेयर आम्दानी क्रमशः ३०.९८, ७५.९० र रु. १०४.०४ हुने प्रक्षेपण गरेकोले भविष्यमा लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो प्रतिफलदिन सक्ने देखिएको हुंदा ढुक्क भएर क्ष्एइ मा लगानी गर्न सकिने देखिन्छ ।